I-loft egcwele ukukhanya engu-40m2 phakathi kwedolobha nemvelo - I-Airbnb
I-loft egcwele ukukhanya engu-40m2 phakathi kwedolobha nemvelo
Tervuren, Vlaanderen, i-Belgium
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Diana
ISAZISO ESIBALULEKILE: NGENXA YEZILINGANISO ZOKUKHANYA KWE-COVID SIYAKWAMUKELA UKUBEKELWA EMZINI OWODWA KUPHELA!
Indawo ephezulu yakhiwe ngokuthula nangokukhululekile engadini enhle eduze kwazo zonke izindawo ezikhangayo ze-Tervuren futhi inokufinyelela eduze kwezithuthi zomphakathi (ithilamu, amabhasi) ukuya eBrussels, eLeuven naseZaventem Airport. Indawo ephelele yokuhlanganisa idolobha nemvelo noma umsebenzi nokuzijabulisa.
Le loft iyingxenye yendlu etholakala engadini enhle enkulu. Inomnyango ohlukile futhi itholakala esitezi sokuqala nokukhanya kwemvelo okuningi. Inobuso obungaba ngu-40m2 futhi inendlu yokugezela eneshawa, usinki kanye nendlu yangasese. Kukhona umbhede owodwa (200*160cm) wabantu abangu-2 kanye nosofa wokulala okhululekile (200*160cm) wabantu ababili. Kukhona i-wifi yamahhala, i-cable TV, ifriji elincane, umshini wekhofi kanye ne-microwave. Kukhona umpheki kagesi wokungenisa imigodi emi-2 wangaphandle ukwenza ukudla okuncane. I-loft ayilungele izingane ezincane (kuze kufike eminyakeni engu-4-5), ngenxa yecala lezitebhisi ezivulekile.
Indawo enhle yokuthola imvelo nokukhanga kuka-Tervuren, iZonienwoud, iBrussels neLeuven nokunye okuningi. Indawo ephezulu itholakala eduze kwePaki yaseTervuren futhi ilungele Ukuhamba Ngezintaba, Nordic Walking, Running, MTB kanye Nebhayisikili. Kubantu abasebenza e-Brussels, izithuthi zomphakathi zizokuyisa lapho emizuzwini engama-20.
Ukwenza lokhu kube yindawo engeke ilibaleke abasingathi bayatholakala ngezincomo. Sikhuluma isiDashi, isiJalimane, isiFulentshi nesiNgisi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Tervuren namaphethelo